Oghere ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ na-emepe akpaaka China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ịgba Ngba Glass,Ụlọ ọrụ akpaaka akpaaka,Oghere ọnụ na-emepe emepe echekwara echedo
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Oghere ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ na-emepe akpaaka
Ihe Nlereanya.: HF-W8525
Akpanaka Glass Sliding ọnụ ụzọ na-eme mgbanwe maka ihe dị iche iche echichi. Ezubere ya maka ọnọdụ dị oke egwu ma ọ bụ maka ebe ndị dị arọ (Ebe nri nri abalị, ọdụ ụgbọelu, ụlọ ọgwụ, wdg) na ndị na-eto eto na ndị na-ajụ ọrụ (ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ nri, wdg) .
Ụdị ọdịdị & ọdịda
(1) Nchedo: Arụ ọrụ site na ịnweta akara sitere na ihe mmetụta, ụzọ ahụ na-agagharị na-akpaghị aka ma ọ ga-agbaghaghachi ozugbo enwere ihe ọ bụla dị n'agbata ọnụ ụzọ ụzọ yana nchekwa nchekwa dị na n'akụkụ abụọ iji mee ka nchekwa dị;
(2) Mfe Ịwụnye: Nhazi modularization na-eme ka nrụnye dị mfe, ọ dị mkpa idozi akụkụ ọ bụla n'ime egwu ma jikọọ wires, ọ ga-agba ọsọ dịka ya;
(3) Ịdabere: Na-ejide obere ụgbọala na-agba ọsọ na obere ngwa ngwa ngwa ngwa nke ngwa ngwa, nke na-enyere ya aka ịmeghe ma mechie ugboro ugboro n'ogologo oge. A na-ejikwa ígwè nke belt na-emepụta ígwè nke na-ezere itinye aka mgbe echichi;
(4) Ntinye aka: Ọ nwere ike iji ya ma ọ bụ ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ma ọ bụ enyo; dị na ma ọ bụ naanị otu mmelite, nhazi ma ọ bụ telescopic.
1. 100% QC nnyocha tupu mbupu.
2. Alibaba atụle afọ 5 Gold Supplier.
3. Kasị Mma & Ọrụ Na-enye Aka na Ọnụ Ụgwọ.
4. Anyị bụ China na-ebute Glass Equipment Manufacturer.
5. Nyochaa site na Nlekọta Nlekọta nke Ụlọ Ọrụ Veritas Certification.
Ọnụ Ụzọ Ịgba Ngba Glass Ụlọ ọrụ akpaaka akpaaka Oghere ọnụ na-emepe emepe echekwara echedo Ọnụ Ụzọ Ịgba Mpempe Glass Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass Ọnụ Ụzọ Ámá Ịgba Mgba abụọ Ọnụ Ụzọ Ịgba Mbata Ime Obodo Ọnụ Ụzọ Gbara Ịgba Glass Na-abanye